မြန်မာပြည်တွင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 287
စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆု သန်းဝင်းလှိုင် ဇူလုိုင် ၄၊ ၂၀၁၃ နုိုဘယ်ဆုသမိုင်းတလျှောက်လုံးတွင် ပြဿနာအပေါ်ဆုံးဆုမှာ စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုပင်ဖြစ်သည်။ စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုများကို ၁၉၁၄၊ ၁၉၁၈၊ ၁၉၃၅၊ ၁၉၄ဝ မှ ၁၉၄၃ အထိ ဆုများ မချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့ချေ။ ထို့အပြင် စာပေဆိုင်ရာဆုကို ငြင်းဆန်သူများလည်း ရှိကြသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်က ရုရှားစာရေးဆရာကြီး ဘောရစ်ပါစတာနက် (Boris Pasternak – ၁၈၉ဝ-၁၉၆ဝ) သည် နိုင်ငံရေးကိစ္စကြောင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ သူသည် ဒေါက်ဇီးဗားဂိုး (Doctor Zhivago) ၀တ္ထုရေးသည့် ထင်ရှားသော စာရေးဆရာဖြစ်သည်။ ၁၉၅၃တွင် စတာလင် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ကရူးရှက်တက်လာသည့်အခါ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများ ကို လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့သည်။ ပါစတာနက်သည် ထိုကာလအတွင်း ဒေါက်တာဇီဗားဂိုးဝတ္ထုကို ရေးသားပြီး နိုင်ငံတော် ထုတ်ဝေရေးတိုက်သို့ ပို့လိုက်သည်။...
အားနေလုို့ ကာတွန်း – အောင်မော် ဇူလုိုင် ၄၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်း အောင်မော်ဖေ့ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ No tags for this post.
အနာဂတ် ပထ၀ီ ကာတွန်း – အောင်မော် ဇူလုိုင် ၄၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မော်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ No tags for this post.
ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များမိတ်ဆက် – Burmese Days and Flowers – My Third Digital in English – Junior Win ဂျူနီယာဝင်း၊ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၃ (အမေဇုံကစာအုပ်ပုံကိုထည့်ပေးရန်) DigitalBooksဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တာအခုလေးအုပ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာကသုံးအုပ်ပါ။တတိယမြောက်စာအုပ်ကအတွေးအမြင်ဆောင်းပါးများမဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးများစုစည်းမူ၉၆+ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဘလော့စရေးခဲ့တာ၂၀၁၁သြဂုတ်လလောက်ကဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ဒီဇင်ဘာလလောက်ကကျွန်မအကိုမောင်ရစ်ကနေအဲဒီမှာရေးတာတွေစုပြီးဆောင်ပါး၁၀၀ကျော်လောက်ဆိုတော့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုလက်တို့ပြီးဖရီးတစ်ရက်နှစ်ရက်ပေးတဲ့အချိန်ယူထားဖို့ပြောရပါတယ်။ဒါပေမယ့်ခက်နေတာကဘယ်သူကမှအမေဇုံဆိုတာဘာမှန်းမသိသူများနဲ့ကြုံရတဲ့အခါစိတ်ဓါတ်ကျရပါတယ်။ပြည်ပတော့မသိပေမယ့်ပြည်တွင်းကတော့တော်တော်လေးမသိသူများတယ်။သူတို့ကဘာကြောင့်စာအုပ်အဖြစ်မထုတ်သလဲတဲ့။ဘယ်မှာဝယ်ဖတ်ရမလဲတဲ့။အမေဇုံမှာဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ပျက်သွားကြပါတယ်။အဲသည်လို စိတ်ဓါတ်ကျသောလည်းထုတ်ဝေသူက ကျွန်မအကိုဆိုတော့ဆက်ရေးရတာအားရှိပြီးသားပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပထမစာအုပ် Walking Through The Wonderland ထွက်ပြီးတစ်လအကြာမှာ My Life Will Go On ကျွန်မဘ၀စာမျက်နှာများပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုဆက်ရေးဖြစ်တယ်။အခုတခါBurmeseDaysAndFlowersဆိုပြီးဆက်ရေးဖြစ်ခဲ့ထွက်ပါပြီ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များဘယ်လိုရှာမလဲ ဒီတခါတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်မနည်းလမ်းပေးကြည့်မယ်။အခုခေတ်ကတကယ်ပဲအင်တာနက်ခေတ်မဟုတ်လား။သီချင်းတွေဘာတွေတောင်ဖလှယ်နေကြတဲ့ခေတ်မဟုတ်လား။ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်လောက်တော့အသာလေးဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။အခုကျွန်မကအမေဇုံဆိုတာဘာမှန်းမသိသူတွေကိုနည်းလမ်းပေးမယ်လေ။သိပြီးကျွမ်းပြီးသူများအတွက်တော့မိကျောင်းမင်းရေခင်းပြဖြစ်နေမယ်။သို့သော်လုံးဝမသိသူများကတော့စမ်းကြည့်တာပေါ့။ အရင်ဆုံး www.amazon.com ကိုရိုက်ထည့်ပြီးအဲဒီစာမျက်နှာကိုဝင်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ကcustomer အသစ်ဖြစ်လို့ Sign up ဆိုတာကိုနှိတ်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ မေးတစ်ခုနဲ့ ပါ့ဝေါ့အသစ်တစ်ခုပေးလိုက်ရုံနဲ့ အမေဇုံအကောင့်တစ်ခုရပါပြီ။ စာအုပ်များရှာနည်း။ ပြီးရင်Searchဆိုတဲ့နေရာမှာ moemaka...
နန်းတော်ကြီးရော ပါမှာလား ကာတွန်း – အောင်မော် ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၃ ကာတွန်းအောင်မော်ဖေ့ဘုတ်ခ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။ No tags for this post.
Burmese Days and Flowers by Junior Win ကျွန်မ၏စတုတ္ထမြောက် ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ တတိယမြောက်အင်္ဂလိပ်လိုရေး ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်အသစ် ဂျူနီယာဝင်း၊ ဇွန် ၂၉၊ ၂၀၁၃ ဒီစာအုပ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ ကာတွန်းမောင်ရစ်ရဲ့သင်္ကြန်အိုးပုံတွေ့တဲ့ မြန်မာလူမျူိးတိုင်းကတော့ သည်စာအုပ်ဟာဖြင့် သင်္ကြန်အိုးမှာထိုးရတဲ့ပန်းတွေနဲ့ နေ့နံတွေအကြောင်းပဲလို့ တွေးမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သည်စာအုပ်စရေးတာက တတိယမြောက် ကျွန်မရဲ့ 96+ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်ထွက်ပြီး၊ ရက်အနည်းငယ်လောက်ကမှဆိုတော့ မေလလယ်လောက်ကပါ။ ဧပြီ ၂၀၁၃ သင်္ကြန်တုန်းကတောင် စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြောရရင် ကျွန်မလိုချင်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို အဲသည်တုန်းက မရိုက်မိလေခြင်းလို့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်ခဲ့ရပါတယ်။ စရေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေ အခုသည်စာအုပ် အပြီးသတ်တဲ့အထိ တရက်မှမနားရပဲ ကြိုးစားရေးသားခဲ့တာပါ။ ခြံဝင်းကျယ်ကျယ်နဲ့ ပန်းတွေစိုက်တာဝါသနာပါသူတွေဆီကို သွားပြီး ဓါတ်ပုံများ သွားရိုက်ရတယ်။ ပန်းမပွင့်သေးလို့ ၃ရက်လောက်စောင့်ပါ ဆိုလို့...
ဦးဝင်းတင်နဲ့ နေထိုင်ခြင်း (၁၀) ကုိုရာဇာ ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၃ ● ဦးဝင်းတင်နဲ့ မယုံသုံးပါး ယုံသုံးပါး ဒီတစ်ပတ်ထုတ် ဒီလှိုင်းမှာ ဦးဝင်းတင်က သမ္မတကြီးကို ကိုယ်ချင်းစာစကားနဲ့ စေတနာထားလိုက်တယ်ဗျ။ သူတို့က နှလုံးစက်တပ်ထား ခြင်းလည်း တူပေသကိုး။ စေတနာထားတာများ ရေစီကမ်းပြိုလိုက်နေသလားတောင် မှတ်ရတယ်။ အဘက အသက်နည်းနည်းပိုကြီး သူဆိုတော့ ဆုံးမတရားလေးလည်း ပါသေးသကိုးဗျ။ သူပြောတာက “သမ္မတကြီး ပျော့ပြောင်း သဘောကောင်းတာ ကျေးဇူးတင်သဗျ။ ပျော်နေ မော်နေတာကြည့်ပြီးလည်း မုဒိတာပွားမိသဗျ။ ဒါပေမယ့် သမ္မတကြီးရယ် ပျော့တော့ မပျော့ပါနဲ့ဗျာ၊ ဆိုတင်း စကားလိုရင်းနဲ့ပါးလိုက် တယ်” ပြောပါတော့ဗျာ။ အဟုတ်ဗျ။ သမ္မတကြီးကို ဘယ်နေရာ တွေ့လိုက် တွေ့လိုက် ပြုံးပြုံကြီးနဲ့ ကိုယ်ပါလိုက်ပြုံးပျော်မော်ကြွားချင်စရာတောင်...
ဝေဒနာရှင်များ တရားသံများ နာကြားနိုင်ပြီ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၃ လူသတ္တဝါ မှန်သမျှတို့သည် မအိုချင်ဘဲ အိုကြရပေလိမ့်မည်။ မနာချင်ဘဲ နာကြရပေလိမ့်မည်။ တစ်နေ့နေ့၌ မသေချင်ဘဲလည်း မုချသေကြရပေလိမ့်မည်။ တစ်နေ့နေ့၌ ရှောင်လွဲ၍မရ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ရမည့် (သေဆုံးခြင်း)ကိစ္စတစ်ခုအတွက် တရားသဘောအား နှလုံးသွင်းကာ ကြိုကြိုတင်တင် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် လေ့ကျင့်ပေးထားခြင်းဖြင့် မကွယ်လွန်မီ လူ့ဘဝ၌ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ များစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တရားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှုများ ပြုလုပ်ပါလျှင် ပြိတ္တာဘုံသို့ မည်သို့မျှ မရောက်ရှိနိုင်ပေ။ ကောင်းမွန် သော ဘုံဘဝသို့သာ ရောက်ရှိရမည်ဟူ၍ သင် တထစ်ချ ယုံကြည်နေသည်ဆိုပါအံ့။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားမှ ပုထုဇဉ်သတ္တဝါတို့သည် ကွယ်လွန်သွားကြချိန်တွင် – ၁။ နတ်ဘုံသို့ လားရောက်ရခြင်း (ဒေဝဂတိ)...
Than Win Hlaing – History of Noble Prize.
နုိုဘယ်ဆုသမိုင်း သန်းဝင်းလှိုင် ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၃ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအသီးသီးမှ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ စာပေပညာရှင်များ နှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံကာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား ထိုက်တန်စွာ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သော ဆုများတွင် `နိုဘယ်ဆု´ မှာ အထင်ရှားဆုံးနှင့် သြဇာတိက္ကမ အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ နိုဘယ်ဆု ကျော်ကြားရခြင်းမှာ မိမိနိုင်ငံ၊ မိမိလူမျိုးအကျိုးအတွက် ကွက်ကွက်လေးသာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၏ လူ့လောကကောင်းကျိုးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ထူးချွန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသာ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ငွေကြေးပမာဏအားဖြင့် များပြားလှခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် သြဇာကြီးမားခြင်း၊ နေ့ချင်းညချင်းကမ္ဘာသိ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း၊ နိုင်ငံရေးသဘောမဆောင်ခြင်းနှင့် မည်သည့်အာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဝေဖန်စောကြောပံ့ပိုးခြင်းများကိုမျှ မလိုက်လျောခြင်းတို့ကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ● နိုဘယ်ဆုဆိုသည်မှာ နိုဘယ်ဆုသည် ဆွီဒင်နိုင်ငံသား သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အဲဖရက်ဘန်းဟပ်နိုဘယ် (Alfred Bernhard...
ဦးဝင်းတင်နဲ့ နေထိုင်ခြင်း အခန်းဆက်များ ကုိုရာဇာ။ ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၃ ● ဦးဝင်းတင်နဲ့ သေခြင်းတရား လူတွေမွေးဖွားကတည်းက တခါတည်း အမှတ်အသားပြုပေးလိုက်တာကတော့ သေခြင်းတရားပဲဗျ။ သေမှာပဲ သေတာ အမျိုးအစားခွဲလိုက် သေးရတယ်။ လူ့သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့လေ…။ အသေဆိုး..အဆိုးသေ..အစိမ်းသေ အစရှိသဖြင့် သေခြင်းတရားကို အမျိုးအစားခွဲထား သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုသေသေ သေတာကတော့ သေတာပါပဲ။ ကျနော်တို့တွေ အသက်အရွယ်သတ်မှတ်ချက်အလိုက် သေခြင်းကို အသက်ကြီးသူများကို ဦးစားပေးထားတယ်ဗျ။ ငါကတော့ ငယ်သေးလို့၊ ဟိုလူကတော့ သေချိန်တန်နေပြီ အစရှိသဖြင့် ဘုရားဟော ဒေသ နာကို နှလုံးမသွင်းနိုင်ပဲ ကိုယ်သေစေ့ချင်တဲ့လူဆို သေချိန်တန်နေပြီ၊ကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့လူဆို အသေစောလို့ နှမြောလှချည့်တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပဲ။ ဆိုပါတော့ဗျာ အဘဦးဝင်းတင် ရှစ်ဆယ့်လေးဆိုတော့၊ ကျနော့်ထက် အသက်ထက်ဝက်မကကြီးတယ်။ ဒီတော့ သေစားရှိ ဦးဝင်းတင်...
Page 287 of 339«1...285286287288289...339»